Warbixin: Diyaarad Hub sidday oo ku Qaraxday Garoonka Aadan Cadde // Daawo | KEYDMEDIA ONLINE
Warbixin: Diyaarad Hub sidday oo ku Qaraxday Garoonka Aadan Cadde // Daawo
Muqdisho (KON) - Diyaarad sidday Hub, oo laga leeyahay Dalka Itoobiya (Ethiopian Cargo) ayaa Saakay ku gubatay Garoonka Diyaaradaha Aadan Cadde ee Magaalada Muqdisho, waxaana Warkaas kasoo baxaya Faah-faahin.
Diyaarada ayaa markii ay soo cagadhigatay waxa u baxay Hal lug, kadibna waxa qabsaday Dab iyadoo ka baxday Wadadii ay ku socotay.
Buburka iyo dabka ka kacay Diyaarada ayaa laga arkayay Agagaarka Garoonka Aadan Cadde, waxaana usoo gurmaday Gawaarida dab-damiska ee Garoonka.
Dowladda ama Amisom wali ma xaqiijin sida ay wax u dhaceen iyo Nuuca Diyaarada, laakiin Wararka Keydmedia Online ay ka heleyso Saraakiil ku sugan Garoonka ayaa sheegaya in Diyaaradaan ay Hub iyo Saanado Ciidan oo kala duwan u sidday Ciidamada Midowga Afrika ee AMSIOM.
Sarkaal ka tirsana Booliska ayaa sheegay in Diyaarada ay "si aan sax ahayn" ugu dagtay Garoonka.
Goob joogayaal ayaa Wariyaha Keydmedia Online ee Muqdisho uu sheegay in Diyaaraddu ay Qaraxday markii ay soo caga dhigatay dhabbaha Diyaaradaha ku soo degaan ee gudaha Garoonka.
"Waxaan u qaadanay in Madfac uu kusoo dhacay Garoonka, Qarax Xooggan ayuu ahaa, kadibnah waxaan aragnay Dab iyo Burbur" Ayuu yiri Nuuriye Cabdi uu Xiligaas ku sugnaa Garoonka, lana hadlaynah Wariyaha Keydmedia Online.
Khasaaraha soo gaaray Saraakiishii saarneed diyaarada wali ma cada, laakiin Wararka Hordhaca ah waxey sheegayaan in Saddex ka mid ah Shaqaalihii Diyaarada ay ku dhinteen Qaraxa, saddex kalena dhaawacyo soo gaaray.
Wali ma cada halka Diyaaraddu ay Hubka kasoo qaadday iyo Saanadaha Ciidan ee wadday.
Waxaa la hakiyo gabi ahaan duullimaadyadii kasoo degi lahaa Garoonka Diyaaradaha Muqdisho.
Wixii kusoo kordha Warkaan, kala soco Boggaan - Keydmedia.net